Vienna မှ Salzburg သို့ နေ့ချင်းပြန်ခရီး
Salzburg သို့ နေ့ချင်းပြန်ခရီး
သြစတြီးယားရှိ Corpus Christi
Mirabell Gardens ၏မြောက်ဘက်ရှိ Andräviertel ဟုလည်းခေါ်သော Salzburg ၏ Neustadt တွင်၊ ယခင်ခံတပ်ကြီးများကို အပြင်းအထန်တိုက်ခိုက်ပြီးနောက် Andräkirche အနီးတဝိုက်တွင် နေရာလွတ်ကို ဖန်တီးထားသော အမှိုက်ပုံ၊ ပုံစံပြထားသော မြက်ခင်းပြင်ဧရိယာ၊ ရှုခင်းသာရှိသော Kurpark ဟုခေါ်သော နေရာတစ်ခုရှိသည်။ . ရေပူစမ်းဥယျာဉ်တွင် ဆောင်းရာသီနှင့် နွေရာသီ လင်ဒန်၊ ဂျပန်ချယ်ရီ၊ ရိုဘီနီးယား၊ ကတ်ဆူရာပင်၊ လေယာဉ်သစ်ပင်နှင့် ဂျပန်မေပယ်ကဲ့သို့သော သက်ကြီးသစ်ပင်များစွာ ပါရှိသည်။
Mozart အကြောင်း သူ၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိများမှတစ်ဆင့် လူသိများလာခဲ့သည့် Bernhard Paumgartner အတွက် ရည်စူးထားသော ခြေလျင်လမ်းသည် မြို့ဟောင်းနှင့် နယ်နိမိတ်တစ်လျှောက် လည်ပတ်ပြီး Kurpark မှ Mirabell Gardens ၏ မြောက်ပိုင်း မြေညီထပ်သို့ ဝင်ပေါက်နှင့် Mariabellplatz ကို ဆက်သွယ်ထားသည်။ သို့သော် ဥယျာဉ်ထဲသို့မဝင်မီ အများသူငှာသန့်စင်ခန်းကို ဦးစွာရှာလိုပေမည်။
Salzburg ကို အပေါ်စီးကနေကြည့်ရင် မြို့ဟာ မြစ်ပေါ်မှာ တည်ရှိပြီး နှစ်ဖက်စလုံးမှာ တောင်ကုန်းလေးတွေနဲ့ ထိစပ်နေတာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ အနောက်တောင်ဘက်တွင် Festungsberg နှင့် Mönchsberg နှင့် အရှေ့မြောက်ဘက်တွင် Kapuzinerberg တို့ပါရှိသော စက်ဝိုင်းတစ်ခုရှိသည်။
Festungsberg ခံတပ်တောင်သည် Salzburg Pre-Alps ၏မြောက်ဘက်အစွန်းတွင်တည်ရှိပြီး Dachstein ထုံးကျောက်အများစုပါဝင်သည်။ Mönchsberg, Monks' Hill သည် လုပ်ငန်းစုများ ပါ၀င်ပြီး ခံတပ်တောင်၏ အနောက်ဘက်သို့ ဆက်သွယ်ထားသည်။ ခံတပ်တောင်၏အရိပ်တွင်တည်ရှိသောကြောင့်၎င်းကို Salzach ရေခဲမြစ်မှဆွဲထုတ်ခြင်းမပြုပါ။
ခံတပ်တောင်ကဲ့သို့မြစ်၏ညာဘက်ခြမ်းရှိ Kapuzinerberg သည် Salzburg Limestone Pre-Alps ၏မြောက်ဘက်အစွန်းတွင်ရှိသည်။ ၎င်းတွင် မတ်စောက်သော ကျောက်မျက်နှာများနှင့် ကျယ်ပြန့်သော အမောက်များ ပါ၀င်ပြီး ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း အလွှာလိုက်ဖြစ်သော Dachstein ထုံးကျောက်နှင့် ဒိုလိုမိုက်ကျောက်တို့ ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ Salzach Glacier ၏ ပွတ်တိုက်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုသည် Kapuzinerberg ကို ၎င်း၏ပုံသဏ္ဍာန်ကိုပေးစွမ်းသည်။
Salzburg ရှိ Mirabell Gardens Square ရှိ အများသူငှာသန့်စင်ခန်း
Mirabell Gardens သည် Salzburg သို့ နေ့ချင်းပြန်ခရီးထွက်ရန် ပထမဆုံးသောနေရာဖြစ်သည်။ Salzburg မြို့သို့ ရောက်ရှိလာသော ဘတ်စ်ကားများသည် ၎င်းတို့၏ ခရီးသည်များကို ဆင်းသက်ခွင့် ပေးသည်။ Mirabell ရင်ပြင်နှင့် Dreifaltigkeitsgasse ပါရီ-Lodron လမ်း၏ T လမ်းဆုံမြောက်ဘက်ကားဂိတ်၊ ကားပါကင်လည်းရှိတဲ့အပြင်၊ CONTIPARK Parkplatz Mirabell-Congress-Garageလိပ်စာအတိအကျမှာ Faber Straße 6-8 ရှိသည့် Mirabell Square တွင်ဖြစ်သည်။ ဒါက လင့်ခ် google map ဖြင့် ကားပါကင်သို့ရောက်ရန်။ Mirabell Square နံပါတ်3၏လမ်းတစ်ဖက်တွင် အခမဲ့အများသုံးသန့်စင်ခန်းတစ်ခုရှိသည်။ ဤလင့်ခ်သည် ဂူဂဲလ်မြေပုံများဖြစ်သည်။ အရိပ်ရသစ်ပင်များပေးဆောင်သည့် အဆောက်အဦအောက်ထပ်တွင် ၎င်းကိုရှာဖွေရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေရန်အတွက် အများသုံးသန့်စင်ခန်း၏တည်နေရာအတိအကျကို သင့်အားပေးသည်။
Salzburg Mirabell Gardens ရှိ Unicorn
ပျက်စီးသွားသော မြို့ပြဇာတ်ရုံနှင့် ယူနီကွန်ရုပ်ထုများမှ ဘောင်းစထရိ၏ အစိတ်အပိုင်းများကို အသုံးပြုထားသော သစ်လွင်ခန့်ညားထည်ဝါသော စကျင်ကျောက်လှေကားသည် မြောက်ဘက်ရှိ Kurgarten ကို တောင်ဘက်ရှိ Mirabell ဥယျာဉ်၏ မြေညီထပ်ငယ်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။
ယူနီကွန်သည် တိရစ္ဆာန်နှင့်တူသည်။ မြင်း နှင့် ဦးချို နဖူးပေါ်၊ ကြမ်းတမ်းပြီး သန်မာပြီး ကျက်သရေရှိတဲ့ တိရစ္ဆာန်လို့ ဆိုထားတာမို့ အပျိုမလေးက သူ့ရှေ့မှာ ချထားမှသာ ဖမ်းမိနိုင်မှာပါ။ ကြံ့ကြံ့ခံသည် အပျို၏ရင်ခွင်ထဲသို့ ခုန်ဆင်းကာ နို့စို့ပြီး ဘုရင့်နန်းတော်သို့ ပို့ဆောင်သည်။ လှေကားထစ်များကို Maria နှင့် von Trapp ကလေးများက ဂီတသံစဉ်တွင် ခုန်ပေါက်ဂီတစကေးတစ်ခုအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့သည်။
Mirabell Gardens သို့ ခြေလှမ်းများဖြင့် Unicorn များ
ဧရာမကျောက်တုံးကြီးနှစ်ကောင်၊ ဦးခေါင်းပေါ်တွင် ဦးချိုနှင့်မြင်းများ ခြေထောက်ပေါ်တင်ကာ Mirabell Gardens ၏မြောက်ဘက်တံခါးဖြစ်သော "Musical Steps" ကို စောင့်ကြပ်ထားသည်။ ငယ်ပေမယ့် စိတ်ကူးယဉ်တတ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေက သူတို့ကို စီးရတာ ပျော်တယ်။ မိန်းကလေးငယ်များသည် ၎င်းတို့ကို တိုက်ရိုက်တက်လှမ်းနိုင်စေရန် လှေကားပေါ်တွင် ပြားပြားဝပ်ကာ Unicorn များသာ အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ တံခါးပေါက်တိရိစ္ဆာန်များသည် မိန်းကလေးများ၏ စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကို လှုံ့ဆော်ပေးပုံရသည်။ မုဆိုးသည် ဖြူစင်သော အပျိုစင်ကလေးဖြင့်သာ ယူနီကွန်ကို ဆွဲဆောင်နိုင်သည်။ နားမလည်နိုင်သော အရာတစ်ခုက ဆွဲဆောင်မှုရှိသော ယူနီကွန်ကို။
"The Musical Steps" မှ ကြည့်ရှုခဲ့သည့် Mirabell Gardens
Mirabell Gardens သည် Salzburg မြို့၏ ယူနက်စကို ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် သမိုင်းဝင်စင်တာ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သော Salzburg ရှိ ခန့်ညားထည်ဝါသော ဥယျာဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏လက်ရှိပုံစံဖြင့် Mirabell Gardens ၏ဒီဇိုင်းကို မင်းသားဂိုဏ်းချုပ် Johann Ernst von Thun မှ Johann Bernhard Fischer von Erlach ၏လမ်းညွှန်မှုဖြင့် တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့သည်။ 1854 ခုနှစ်တွင် ဧကရာဇ် Franz Joseph မှ Mirabell Gardens ကို အများပြည်သူသို့ ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
Baroque စကျင်ကျောက်လှေကား Mirabell နန်းတော်
Mirabell နန်းတော်ကို 1606 ခုနှစ်တွင် မင်းသား-ဂိုဏ်းချုပ် Wolf Dietrich က သူချစ်သော Salome Alt အတွက် တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ "Baroque Marble Staircase" သည် Mirabell Palace ၏ မာဘယ်လ်ခန်းမဆီသို့ ဦးတည်သည်။ နာမည်ကျော် လှေကားလေးစင်း (1722) သည် Johann Lucas von Hildebrandt ၏ ဒီဇိုင်းကို အခြေခံထားသည်။ ၎င်းကို 1726 ခုနှစ်တွင် တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ခေတ်တွင် အရေးအကြီးဆုံး ဗဟိုဥရောပပန်းပုပညာရှင် Georg Raphael Donner က တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ balustrade အစား၊ C-arcs နှင့် putti အလှဆင်မှုများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် စိတ်ကူးယဉ် ဘောင်များဖြင့် လုံခြုံစွာ အကာအကွယ်ပေးထားသည်။
အရပ်ရှည်ပြီး အညိုရင့်ရောင်ဆံပင်နှင့် မီးခိုးရောင်မျက်လုံးများဖြင့် မြို့တွင်းအလှဆုံးအမျိုးသမီး Salome Alt။ Wolf Dietrich သည် Waagplatz ရှိ မြို့၏အရက်သောက်ခန်းတွင် ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတစ်ခုအတွင်း သူမနှင့် ရင်းနှီးခဲ့သည်။ ထိုနေရာ၌ မြို့တော်ကောင်စီ၏ တရားဝင်ဘုတ်အဖွဲ့များကို ကျင်းပပြီး ပညာရေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များ ပြီးဆုံးခဲ့သည်။ Archbishop Wolf Dietrich မင်းသားအဖြစ် အရွေးခံရပြီးနောက်တွင် သူသည် ဘာသာရေးဆရာအဖြစ် လက်ထပ်ရန် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော သာသနာပြုခွင့်ကို ရယူရန် ကြိုးစားခဲ့သည်။ သူ၏ဦးလေး Cardinal Marcus Sitticus von Hohenems မှဖျန်ဖြေရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သော်လည်း၊ ဤပရောဂျက်သည် မအောင်မြင်ခဲ့ပေ။ 1606 ခုနှစ်တွင် သူ့တွင် Salome Alt အတွက် တည်ဆောက်ထားသော Altenau ရဲတိုက်၊ ယခု Mirabell ဟုခေါ်သော ရောမ "Ville suburbane" ကို ပုံစံပြထားသည်။
Bellerophon သည် အကြီးကျယ်ဆုံး သူရဲကောင်းနှင့် ဘီလူးများကို သတ်သူဖြစ်ပြီး ဖမ်းထားသော မြင်းပျံကို စီးသည်။ သူ့ရဲ့ အကြီးမားဆုံး စွမ်းဆောင်ချက်ကတော့ မြွေဆိုးကို သတ်ခြင်းပါပဲ။ Chimeraခြင်္သေ့ခေါင်းနှင့် မြွေအမြီးပါသော ဆိတ်တစ်ကောင်၊ Bellerophon သည် Pegasus ကိုစီးရန်ကြိုးစားပြီးနောက်နတ်ဘုရားများ၏မျက်နှာသာကိုရရှိခဲ့သည်။ တောင်ပေါ်က Olympus တို့ သူတို့ကို join ဖို့။
Pegasus စမ်းရေ မာရီယာနှင့်ကလေးများသည် ဒိုရီမီကို သီဆိုရင်း တေးဂီတသံတွင် ခုန်ပေါက်သွားကြသည်။ Pegasus၊ ဒဏ္.ာရီ ဘုရားသခငျ့ မြင်း အမျိုးအနွယ်ဖြစ်၏။ အိုလံပစ် ဘုရားသခ Poseidon မှာမြင်းများ၏ဘုရား။ မြင်းတောင်ပံသည် မြေကြီးပေါ်သို့ ခွာသွားရာ နေရာတိုင်းတွင် စိတ်အားထက်သန်သော စမ်းရေပေါက်တစ်ခု ထွက်ပေါ်လာသည်။
ခံတပ်နံရံမှာ လဲလျောင်းနေတဲ့ ကျောက်ခြင်္သေ့နှစ်ကောင်က အရှေ့ဘက်မှာ တစ်ကောင်က ကောင်းကင်ကို မော့ကြည့်လိုက်ပြီး မြေညီထပ်ငယ်လေးကနေ ခံတပ်ဥယျာဉ်အထိ ဝင်ပေါက်ကို စောင့်နေပါတယ်။ Babenbergs ၏လက်များပေါ်တွင်ခြင်္သေ့သုံးကောင်ရှိသည်။ Salzburg ပြည်နယ် လက်ရုံး၏ ညာဘက်တွင် ဖြောင့်ဖြောင့် အနက်ရောင် ခြင်္သေ့တစ်ကောင်သည် ရွှေရောင်ဖြင့် ညာဘက်သို့ လှည့်နေပြီး ဘယ်ဘက်တွင် Babenberg အင်္ကျီပေါ်တွင် အနီရောင် ငွေဘားတစ်ခု၊ Austrian ဒိုင်းကို ပြသထားသည်။
Zwergerlgarten၊ Dwarf Gnome Park
Mount Untersberg စကျင်ကျောက်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ပန်းပုရုပ်တုများပါရှိသော လူပုဥယျာဉ်သည် Fischer von Erlach မှ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော Mirabell ဥယျာဉ်၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ခန့်ညားထည်ဝါသောကာလတွင်၊ အရွယ်ရောက်ပြီး တိုတောင်းသောလူများကို ဥရောပတရားရုံးများစွာတွင် အလုပ်ခန့်ခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့ သစ္စာရှိမှုနဲ့ သစ္စာရှိမှုကို တန်ဖိုးထားကြတယ်။ လူပုလေးတွေဟာ မကောင်းမှုမှန်သမျှ ကင်းဝေးစေရမယ်။
Hedge Tunnel ပါရှိသော Western Bosket
ပုံမှန် Baroque Bosquet သည် Fischer von Erlach ၏ ခန့်ညားထည်ဝါသော Mirabell ဥယျာဉ်တွင် "သစ်သား" အနည်းငယ်ကို လက်ရာမြောက်စွာ ဖြတ်တောက်ထားသည်။ သစ်ပင်များနှင့် အကာအရံများကို ခန်းမကဲ့သို့ ကျယ်ပြန့်သော ဝင်ရိုးဖြောင့်ဖြင့် ဖြတ်သွားကြသည်။ ထို့ကြောင့် ဘော့စကတ်ကို စင်္ကြံများ၊ လှေကားများနှင့် ခန်းမများပါရှိသော ရဲတိုက်အဆောက်အအုံနှင့် ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားပြီး အခန်းတွင်းဖျော်ဖြေပွဲများနှင့် အခြားဖျော်ဖြေပွဲငယ်များအတွက် ရဲတိုက်အတွင်းပိုင်းကိုလည်း အလားတူအသုံးပြုခဲ့သည်။ ယနေ့ Mirabell ရဲတိုက်၏ အနောက်ဘက် ဘောက်စ်တွင် ပုံမှန်ဖြတ်တောက်ခြင်းဖြင့် ဂျီဩမေတြီပုံသဏ္ဍာန်ရှိသော ကုဗပုံသဏ္ဍာန်ဖြင့် ထိန်းသိမ်းထားသည့် ဆောင်းတွင်းသစ်ပင်များ၏ သုံးတန်း "လမ်း" ပါ၀င်ပြီး၊ ခြံဥမင်လိုဏ်ခေါင်း မာရီယာနှင့် ကလေးများသည် ဒိုရီမီ သီချင်းဆိုနေစဉ် ပြေးသွားကြသည်။
Salzach ၏လက်ဝဲဘက်ရှိမြို့ဟောင်းအထက် Hohensalzburg ခံတပ်၏တောင်ဘက်သို့ဦးတည်ထားသော Mirabell Gardens ၏ကြီးမားသောဥယျာဉ် parterre ရှိ Baroque ပန်းခုတင်ဒီဇိုင်းတွင် ကျူးလစ်အနီရောင် ကျူးလစ်အလျား၊ 1811 ခုနှစ်တွင် Archdiocese of Salzburg ၏လောကကိုပြောင်းလဲပြီးနောက်၊ ဥယျာဉ်ကို Bavaria ၏အိမ်ရှေ့မင်းသား Ludwig မှလက်ရှိအင်္ဂလိပ်ရှုခင်းဥယျာဉ်ပုံစံဖြင့်ပြန်လည်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူခဲ့ပြီး Baroque ဧရိယာများ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။
1893 ခုနှစ်တွင် အနောက်တောင်ဘက်နှင့်ကပ်လျက် ကြီးမားသော အဆောက်အအုံကြီးဖြစ်သည့် Salzburg ပြဇာတ်ရုံ ဆောက်လုပ်မှုကြောင့် ဥယျာဉ်ဧရိယာ လျှော့ချခဲ့သည်။ Makartplatz ရှိ Salzburg State Theatre ကို Viennese ကုမ္ပဏီ Fellner & Helmer မှ တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ 1775 ခုနှစ်တွင် Prince Archbishop Hieronymus Colloredo ဆောက်လုပ်ခဲ့သော မင်းသား Archbishop Hieronymus Colloredo သည် Ballroom အစား XNUMX ခုနှစ်တွင် တည်ဆောက်ခဲ့သော မင်းသား Archbishop Hieronymus Colloredo မှ ဇာတ်ရုံဟောင်းပြီးနောက် New City Theater အဖြစ် ရုပ်ရှင်ရုံများ တည်ဆောက်ရာတွင် အထူးပြုတည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ လုံခြုံရေး ချို့ယွင်းချက်ကြောင့် ဖြိုချခြင်းခံရသည်။
Makartplatz ဝင်ပေါက်ရှိ "Borghesi fencers" ၏ပန်းပုများသည် ရောမမြို့အနီးတွင်တွေ့ရှိခဲ့သည့် 17 ရာစုမှရှေးဟောင်းပန်းပုရုပ်တုများကိုအခြေခံ၍ အတိအကျလိုက်ဖက်သောပုံတူများဖြစ်ပြီး ယခု Louvre တွင်ရှိသည်။ မြင်းစီးသူရဲနဲ့ တိုက်ခိုက်နေတဲ့ စစ်သည်တော်တွေရဲ့ ရှေးခေတ် အသက်အရွယ် ရုပ်တုကို Borghesian fencer လို့ ခေါ်ပါတယ်။ Borghesian ခြံစည်းရိုးသည် ၎င်း၏ အလွန်ကောင်းမွန်သော ခန္ဓာဗေဒဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြင့် ခွဲခြားထားပြီး ထို့ကြောင့် လက်ရာမြောက်သည့် အနုပညာလက်ရာများတွင် အလေးစားရဆုံး ပန်းပုများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
Holy Trinity ဘုရားကျောင်း၊ Dreifaltigkeitskirche
1694 တွင် Prince Archbishop Johann Ernst Graf Thun နှင့် Hohenstein တို့သည် သူတည်ထောင်ခဲ့သော ကောလိပ်နှစ်ခုအတွက် ဘုန်းတော်ကြီးများအိမ်အသစ်ဆောက်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည် အလယ်ခေတ်ဝင်ပေါက်နှင့် Mannerist Secundogenitur နန်းတော်ကြားရှိနေရာ။ ယနေ့တွင်၊ ယခင် Hannibal ဥယျာဉ်ဖြစ်သော Makart ရင်ပြင်ကို Johann Bernhard Fischer von Erlach က ကောလိပ်အဆောက်အဦများအလယ်၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်အိမ်သစ်' တွင် တည်ဆောက်ထားသည့် Holy Trinity Church ၏မျက်နှာစာမှ လွှမ်းမိုးထားသည်။
Salzburg ရှိ Makart ရင်ပြင်ရှိ Mozart ၏အိမ်
"Tanzmeisterhaus" တွင်၊ အိမ်အမှတ်။ 8 Hannibalplatz ပေါ်တွင် ဧကရာဇ် Franz Joseph I. မှ ခန့်အပ်ခြင်းခံရသော အနုပညာရှင်၏ ဘဝတစ်လျှောက်လုံးတွင် Makartplatz ဟု အမည်ပြောင်းခဲ့သည့် Trinity Church သို့ အလျားလိုက်ဝင်ရိုးတစ်လျှောက် သေးငယ်သော စတုဂံစတုရန်းစတုရန်းပုံ၊ မင်းမျိုးမင်းနွယ်များဖြစ်သော Wolfgang Amadeus Mozart နှင့် သူ၏မိဘများသည် 1773 မှ 1781 ခုနှစ်တွင် Vienna သို့ပြောင်းသွားသည်အထိပထမထပ်တိုက်ခန်းတွင်နေထိုင်ခဲ့ပြီးယခု Wolfgang Amadeus Mozart မွေးဖွားခဲ့သည့် Getreidegasse ရှိတိုက်ခန်းပြီးနောက်ပြတိုက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Holy Trinity ဘုရားကျောင်း မျက်နှာစာ
ပြွန်နေသောမျှော်စင်များကြားတွင်၊ Holy Trinity Church ၏မျက်နှာစာသည် 1694 မှ 1702 ခုနှစ်အထိ Johann Bernhard Fischer von Erlach မှတည်ဆောက်သော XNUMX မှ XNUMX မှ XNUMX မှ XNUMX မှ XNUMX အထိ အဝိုင်းခုံးပြတင်းပေါက်များနှင့်အတူ အဝိုင်းခုံးပြတင်းပေါက်များပါရှိသော ခုံးခုံးပြတင်းပေါက်များဖြင့် ရွေ့လျားနေသည်။ နှစ်ဘက်စလုံးတွင် ခေါင်းလောင်းများနှင့် နာရီမြင်းမိုရ်များဖြင့် မျှော်စင်များရှိသည်။ ထပ်ခိုးပေါ်တွင်၊ သူ၏ဝိညာဉ်ရေးနှင့်လောကပါဝါကိုသုံးဆောင်သူမင်းသားဂိုဏ်းချုပ်ဘုန်းတော်ကြီး Johann Ernst von Thun နှင့် Hohenstein တို့၏ရိုးရာအကသင်္ကေတအဖြစ်လူလိမ်နှင့်ဓားဖြင့်တည်ထောင်သူ၏လက်ရုံးအင်္ကျီ။ အလယ်ဗဟိုကွေ့သည် ပရိသတ်အား ပိုမိုနီးကပ်စွာရွှေ့ကာ ဘုရားကျောင်းထဲသို့ ဝင်ရောက်ရန် ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
ဘုရားကျောင်းနှင့် အမိုးခုံးကြား ချိတ်ဆက်ထားသော၊ ဆလင်ဒါပုံ၊ ပြတင်းပေါက် လင့်ခ်ကို သေးငယ်သော စတုဂံပြတင်းပေါက်များဖြင့် ရှစ်ယူနစ် ခွဲခြားထားသည်။ အမိုးခုံးနံရံဆေးရေးပန်းချီကို Johann Michael Rottmayr က 1700 ခုနှစ်ဝန်းကျင်က ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး သန့်ရှင်းသောကောင်းကင်တမန်များ၊ ပရောဖက်များနှင့် ဘိုးဘေးများ၏အကူအညီဖြင့် Maria နန်းတက်ပွဲကို ပြသခဲ့သည်။
မျက်နှာကျက်တွင် စတုဂံပြတင်းပေါက်များဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည့် ဒုတိယမြောက် ပိုသေးငယ်သော tambour တစ်ခုရှိသည်။ Johann Michael Rottmayr သည် သြစတြီးယားရှိ Baroque အစောပိုင်းတွင် အလေးစားဆုံးနှင့် အလုပ်အများဆုံး ပန်းချီဆရာဖြစ်သည်။ Trinity Church ကို Prince Archbishop Johann Ernst von Thun နှင့် Hohenstein မှ 1694 မှ 1702 မှ XNUMX မှ XNUMX ခုနှစ်အထိတည်ဆောက်ခဲ့သော Trinity Church ၏ဒီဇိုင်းများအရသူအား Johann Bernhard Fischer von Erlach မှအလွန်တန်ဖိုးထားခဲ့သည်။
Salzburg Trinity ဘုရားကျောင်းအတွင်းပိုင်း
ဘဲဥပုံပင်မအခန်းကို ပင်မယဇ်ပလ္လင်အထက်တွင်ရှိသော စက်ဝိုင်းပုံပြတင်းပေါက်တစ်ခုမှတစ်ဆင့် အလင်းရောင်ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားပြီး စတုဂံအသေးများကို သေးငယ်သောစတုဂံများအဖြစ် ပျားလပို့အတွင်းမှ မျှော့အကန့်များဟု ခေါ်တွင်သော ထောင့်ချိုးများအဖြစ် ပိုင်းခြားထားသည်။ မြင့်မားသောယဇ်ပလ္လင်သည် မူလက Johann Bernhard Fischer von Erlach ၏ဒီဇိုင်းမှဆင်းသက်လာသည်။ ယဇ်ပလ္လင်၏အလှည့်အပြောင်းများသည် လေဒီကူလာဖြစ်ပြီး ကျောက်တုံးများပါရှိသော စကျင်ကျောက်ပုံစံနှင့် ပြားချပ်ချပ်ချပ်လေးများရှိသော မြင်းမိုရ်ဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းသောသုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူနှင့် မြတ်နိုးဖွယ်ကောင်းသော ကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးကို ပလပ်စတစ်အုပ်စုအဖြစ် ပြသထားသည်။
ဓမ္မကထိက လက်ဝါးကပ်တိုင်ပါသော တရားဟောစင်ကို ညာဘက်ရှိ နံရံတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ အခန်း၏ ဘဲဥပုံပုံသဏ္ဍာန်ကို အလေးပေးသည့် ပုံစံပါရှိသော စကျင်ကျောက်ကြမ်းပြင်ပေါ်ရှိ ထောင့်ဖြတ်နံရံလေးခုပေါ်တွင် တင်တံများရှိသည်။ လျှို့ဝှက်ဝှက်ထဲတွင် Johann Bernhard Fischer von Erlach ၏ ဒီဇိုင်းကို အခြေခံ၍ တည်ဆောက်သူ Prince Archbishop Johann Ernst Count Thun နှင့် Hohenstein တို့၏ နှလုံးသားဖြင့် scophagus ရှိသည်။
Linzer GasseSalzach ၏ညာဘက်ကမ်းရှိ Salzburg မြို့ဟောင်း၏ရှည်လျားသောလမ်းမကြီးသည် Platzl မှ Schallmoserstraße သို့ Vienna ၏ဦးတည်ချက်ဆီသို့ဦးတည်သည်။ Stefan-Zweig-Platz ၏မြင့်သောနေရာတွင် Linzer Gasse စတင်ပြီးနောက်မကြာမီ Francis Gate သည် Linzer Gasse ၏ညာဘက်၊ တောင်ဘက်တွင်တည်ရှိသည်။ Francis Gate သည် မြင့်မားသော2ထပ်လမ်းဝင်ဖြစ်ပြီး၊ Stefan-Zweig-Weg မှ Francis Port သို့နှင့် Capuzinerberg ရှိ Capuchin ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသို့ rustic လိုက်ဖက်သောတံခါးဖြစ်သည်။ မုခ်ဝတွင် 1612 မှ 1619 ခုနှစ်အထိ Francis Gate တည်ဆောက်သူ Francis Gate ၏ မင်းသား Salzburg မှ Count Markus Sittikus မှ Count Markus Sittikus ၏ လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ထုလုပ်ထားသော ကျည်တောင့်များရှိသည်။ စစ်တပ်၏ကျည်တောင့်အထက်တွင် HL ၏အမည်းစက်ခြင်းခံရသောသက်သာရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖရန်စစ်သည် ၁၆၁၇ ခုနှစ်မှ လွင့်နေသော မြင်းမိုရ်ကို ဘောင်ခတ်ထားသည်။
Linzer Gasse Salzburg ရှိ နှာခေါင်းဒိုင်း
Linzer Gasse တွင်ရိုက်ထားသောဓာတ်ပုံ၏အာရုံမှာ နှာခေါင်းဒိုင်းဟုလည်းသိကြသော သံထည်ကွင်းများပေါ်တွင်ဖြစ်သည်။ လက်သမားနှာခေါင်းအကာများကို အလယ်ခေတ်ကတည်းက ပန်းပဲဆရာများက သံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ကြော်ငြာထားသော လက်မှုပညာသည် သော့ကဲ့သို့သော သင်္ကေတများဖြင့် အာရုံစိုက်ထားသည်။ Guilds များသည် ဘုံအကျိုးစီးပွားများကို ကာကွယ်ရန် အလယ်ခေတ်တွင် ဖန်တီးခဲ့သော လက်သမားဆရာများ၏ ကော်ပိုရေးရှင်းများဖြစ်သည်။
Linzer Gasse တွင်၊ 41 ၎င်း၏အရှေ့တောင်ဘက်အလျားနှင့် Linzer Gasse နှင့်အညီ၎င်း၏မျက်နှာစာမျှော်စင်နှင့် Sebastians ဘုရားကျောင်းရှိသည်။ ပထမဆုံး စိန့် Sebastian's Church သည် 1505-1512 မှစတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းကို 1749-1753 မှပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ပြန်ဆုတ်ထားသော အဝိုင်းရှိ မြင့်မားသော ယဇ်ပလ္လင်သည် ကျောက်တုံးများ အစုအဝေးများပါရှိသော အနည်းငယ် ရှိုက်သော စကျင်ကျောက်ဖြင့် တည်ဆောက်ထားပြီး တိုင်တစ်ရံ၊ ဖြောင့်တန်းသော ကန့်လန့်ကာနှင့် သရက်ကင်းထိပ်တို့ ဖြစ်သည်။ အလယ်ဗဟိုတွင် 1610 ခုနှစ်ဝန်းကျင်က ကလေးနှင့်အတူ မေရီနှင့်အတူ ရုပ်ထုတစ်ခုရှိသည်။ ကောက်နုတ်ချက်တွင် 1964 ခုနှစ်မှ Saint Sebastian ရုပ်ကြွရုပ်ထုတစ်ခုရှိသည်။
မုခ် Sebastian သင်္ချိုင်း Salzburg
Linzer Straße မှ Sebastian သင်္ချိုင်းသို့ဝင်ရောက်ခြင်းသည် Sebastian ဘုရားကျောင်းနှင့် Altstadthotel Amadeus အကြားဖြစ်သည်။ တည်ထောင်သူနှင့်တည်ဆောက်သူ Prince Archbishop Wolf Dietrich ၏လက်ရုံးအင်္ကျီပါရှိသော 1600 မှ pilasters၊ entablature နှင့် ထိပ်ပိုင်းတို့ထိစပ်နေသော semicircular arch portal တစ်ခု။
Sebastian သင်္ချိုင်းသည် Sebastian ဘုရားကျောင်း၏အနောက်မြောက်ဘက်သို့ဆက်သွယ်သည်။ 1595-1600 မှ မင်းသား Archbishop Wolf Dietrich ကိုယ်စား အီတလီ Campi Santi ကို ပုံစံပြပြီး 16 ရာစုအစကတည်းက တည်ရှိခဲ့သော သင်္ချိုင်းတစ်ခုတွင် တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ "သန့်ရှင်းသောလယ်ကွင်း" အတွက် အီတလီ၊ Camposanto၊ သည် အတွင်းဘက်တွင် တံခါးပေါက်ဖွင့်ထားသော ဝင်းနှင့်တူသော အလုံပိတ်သုသာန်အတွက် အီတလီအမည်ဖြစ်သည်။ Sebastian သင်္ချိုင်းကို တစ်ဖက်တစ်ချက်စီတွင် ခုံတိုင်များဖြင့် ဝန်းရံထားသည်။ အာကိတ်များကို ခုံးခါးပတ်များကြားတွင် ပေါင်ခြံအနိမ့်များ တပ်ဆင်ထားသည်။
ဂူဗိမာန်သို့သွားရာလမ်းဘေးရှိ Sebastian သင်္ချိုင်း၏လယ်ပြင်တွင်၊ Mozart ဝါသနာအိုး Johann Evangelist Engl သည် Nissen မိသားစု၏သင်္ချိုင်းအုတ်ဂူများပါဝင်သော ခင်းကျင်းပြသထားသော သင်္ချိုင်းတစ်ခုရှိသည်။ Georg Nikolaus Nissen သည် မုဆိုးမ Mozart နှင့် Constanze နှင့် ဒုတိယအိမ်ထောင်ရှိခဲ့သည်။ Mozart ၏ဖခင် Leopold သည် ယနေ့တွင် သုသာန်၏တောင်ဘက်ခြမ်းရှိ Eggersche အုတ်ဂူတွင် နံပါတ် 83 ဟုခေါ်သည့် အများသူငှာသင်္ချိုင်းတွင် မြှုပ်နှံထားသည်။ Wolfgang Amadeus Mozart သည် Vienna ရှိ St. Marx တွင် အနားယူပြီး၊ Paris ရှိ Saint-Eustache တွင် ၎င်း၏မိခင်နှင့် Salzburg ရှိ St. Peter ရှိ ညီမ Nannerl တို့ တွင် အိပ်စက်နေပါသည်။
မြူးနစ် Kindl of Salzburg
Dreifaltigkeitsgasse / Linzer Gasse ၏ထောင့်ရှိ အဆောက်အဦ၏ထောင့်တွင် “Münchner Hof” ဟုခေါ်သော ပန်းပုရုပ်တုကို ပထမထပ်ရှိ အပြူးသားအစွန်းတွင် ချိတ်တွဲထားပြီး စတိုင်ကျသော ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် မြှောက်ထားပြီး ဘယ်ဘက်လက်ကို ကိုင်ဆောင်ထားသည်။ စာအုပ်။ မြူးနစ်၏တရားဝင်လက်ရုံးအင်္ကျီမှာ ကျမ်းကျိန်စာအုပ်ကို ဘယ်ဘက်လက်တွင် ကိုင်ဆောင်ထားပြီး ညာဘက်တွင် ကျမ်းကျိန်သည့် ဘုန်းကြီးတစ်ပါးဖြစ်သည်။ မြူးနစ်၏လက်နက်အင်္ကျီကို Münchner Kindl ဟုခေါ်သည်။ "Goldenes Kreuz-Wirtshaus" သည် Salzburg ရှိ ရှေးအကျဆုံး ဘီယာချက်စက်ရုံ နေရာတွင် Münchner Hof တည်ရှိနေပါသည်။
Salzburg ရှိ Salzach
Salzach သည် အင်းထဲသို့ မြောက်ဘက်သို့ စီးဆင်းသည်။ ၎င်းသည် မြစ်ပေါ်တွင် လုပ်ကိုင်သော ဆားတင်ပို့မှုတွင် ၎င်း၏အမည်ကို ပေးဆောင်သည်။ Hallein Dürrnberg မှဆားသည် Salzburg ဂိုဏ်းချုပ်ဘုန်းတော်ကြီးများအတွက်အရေးကြီးဆုံးဝင်ငွေအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ Salzach နှင့် Inn တို့သည် Berchtesgaden တွင်ဆားသိုက်များရှိသည့် Bavaria နှင့်နယ်စပ်တွင်လည်ပတ်သည်။ အခြေအနေနှစ်ခုလုံးသည် မင်းသား Archbishop Wolf Dietrich ၏ Berchtesgaden ကို သိမ်းပိုက်ခြင်းဖြင့် 1611 ခုနှစ်တွင် အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ရှိခဲ့သော Salzburg နှင့် Bavaria ဂိုဏ်းချုပ်ဘုန်းတော်ကြီးများကြား ပဋိပက္ခများအတွက် အခြေခံဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်၊ Bavaria မြို့စား Maximilian I သည် Salzburg ကိုသိမ်းပိုက်ပြီး Prince Archbishop Wolf Dietrich ကိုနန်းစွန့်ခိုင်းခဲ့သည်။
မြို့တော်ခန်းမအုတ်ခုံကိုဖြတ်၍ မြို့တော်ခန်းမရင်ပြင်သို့ လျှောက်လှမ်းပါ။ မြို့တော်ခန်းမ၏အဆုံးတွင် မြို့တော်ခန်းမ၏မျှော်စင်သည် အဆောက်အအုံ၏ rococo မျက်နှာစာ၏ ဘေးဝင်ရိုးတွင် တည်ရှိသည်။ မြို့တော်ခန်းမဟောင်း၏ မျှော်စင်ကို ထောင့်ခုံးတိုင်များ တပ်ဆင်ထားပြီး စင်္ကြံအထက်တွင် ဧရာမ တံကဲကြီးများ တပ်ဆင်ထားသည်။ မျှော်စင်ပေါ်တွင် အစိတ်အပိုင်းပေါင်းစုံ အမိုးခုံးပါသည့် ဆဋ္ဌဂံခေါင်းလောင်းမျှော်စင်ငယ်တစ်ခုရှိသည်။ ခေါင်းလောင်းမျှော်စင်တွင် ၁၄ ရာစုနှင့် ၁၆ ရာစုမှ ခေါင်းလောင်းငယ် နှစ်ခုနှင့် ၂၀ ရာစုမှ ခေါင်းလောင်းကြီးတစ်ခု ပါရှိသည်။ အလယ်ခေတ်တွင်၊ မျှော်စင်နာရီကို 14 ရာစုတွင်သာထည့်သွင်းထားသောကြောင့်နေထိုင်သူများသည်ခေါင်းလောင်းကိုမှီခိုခဲ့ကြသည်။ ခေါင်းလောင်းသံသည် ဒေသခံများကို အချိန်ပေး၍ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားချိန်တွင် ပေါက်ကွဲခဲ့သည်။
Alte Markt သည် Kranzlmarkt-Judengasse လမ်းဘေးရှိ ကျဉ်းမြောင်းသော မြောက်ဘက်ခြမ်းတွင် ထောင့်မှန်စတုဂံပုံဖြစ်ပြီး တောင်ဘက်တွင် စတုဂံပုံသဏ္ဍာန်ဖြင့် ကျယ်လာပြီး နေအိမ်ဆီသို့ ဖွင့်လှစ်ထားသည်။ စတုရန်းကို ခံ့ညားထည်ဝါသော ၅ ထပ်မှ ၆ ထပ်ရှိ မြို့ပြအိမ်များ၏ အပိတ်အတန်းများဖြင့် ဘောင်ခတ်ထားပြီး အများစုမှာ အလယ်ခေတ် သို့မဟုတ် ၁၆ ရာစုမှ ဖြစ်သည်။ အိမ်များသည် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း 5-မှ 6-၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း 16-မှ 3-ဝင်ရိုးများဖြစ်ပြီး အများအားဖြင့် စတုဂံပုံပြတင်းပေါက်များနှင့် ပရိုဖိုင်းတံစက်မြိတ်များရှိသည်။
ဖြောင့်စင်းသော ပြတင်းပေါက်များ၊ ချပ်ပြားပုံစံအလှဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ၁၉ ရာစုမှ နူးညံ့သိမ်မွေ့သော အပြင်အဆင်များပါရှိသော သွယ်လျသော အင်္ဂတေမျက်နှာစာများ၏ လွှမ်းမိုးမှုသည် နေရာ၏ဇာတ်ကောင်အတွက် အဆုံးအဖြတ်ဖြစ်သည်။ Josephine slab ပုံစံသည် ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်ရှိ ရိုးရှင်းသော အဆောက်အဦများကို အသုံးပြုခဲ့ပြီး၊ နံရံများနှင့် slabs အလွှာများအဖြစ် tectonic အစီအစဉ်ကို ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။ Alter Markt ရှိ ရင်းနှီးသောရင်ပြင်အလယ်တွင် ယခင်ဈေးစမ်းရေတွင်းသည် စိန့်ဖလိုရီယန်အတွက် မြင့်မြတ်သော စမ်းရေတွင်းအလယ်တွင် Floriani ကော်လံတစ်ခုပါရှိသည်။
Untersberg စကျင်ကျောက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် အဋ္ဌဂံပုံရေတွင်းကို 1488 ခုနှစ်တွင် Gersberg မြို့တံတားပေါ်မှ ဈေးဟောင်းသို့ သောက်ရေပိုက်တစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးနောက် ရေဆွဲရေတွင်းဟောင်းနေရာတွင် တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ စမ်းရေတွင်းတွင် တန်ဆာဆင်ထားသော ခရုပတ်ကင်သည် 1583 ခုနှစ်မှ စတင်ခဲ့ပြီး၊ စာရွက်သတ္တု၊ ibexes၊ ငှက်များ၊ မြင်းစီးသူများနှင့် ဦးခေါင်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် သည်းထိတ်ရင်ဖိုဖွယ်အမှုန်အမွှားများဖြင့် အဆုံးသတ်ထားသည်။
Alte Markt သည် Kranzlmarkt-Judengasse လမ်းဘေးရှိ ကျဉ်းမြောင်းသော မြောက်ဘက်ခြမ်းတွင် ထောင့်မှန်စတုဂံပုံဖြစ်ပြီး တောင်ဘက်တွင် စတုဂံပုံသဏ္ဍာန်ဖြင့် ကျယ်လာပြီး နေအိမ်ဆီသို့ ဖွင့်ထားသည်။
စတုရန်းကို ခံ့ညားထည်ဝါသော ၅ ထပ်မှ ၆ ထပ်ရှိ မြို့ပြအိမ်များ၏ အပိတ်အတန်းများဖြင့် ဘောင်ခတ်ထားပြီး အများစုမှာ အလယ်ခေတ် သို့မဟုတ် ၁၆ ရာစုမှ ဖြစ်သည်။ အိမ်များသည် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း 5-မှ 6-၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း 16-မှ 3-ဝင်ရိုးများဖြစ်ပြီး အများအားဖြင့် စတုဂံပုံပြတင်းပေါက်များနှင့် ပရိုဖိုင်းတံစက်မြိတ်များရှိသည်။
ဖြောင့်စင်းသော ပြတင်းပေါက်များ၊ ချပ်ပြားပုံစံအလှဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ၁၉ ရာစုမှ နူးညံ့သိမ်မွေ့သော အပြင်အဆင်များပါရှိသော သွယ်လျသော အင်္ဂတေမျက်နှာစာများ၏ လွှမ်းမိုးမှုသည် နေရာ၏ဇာတ်ကောင်အတွက် အဆုံးအဖြတ်ဖြစ်သည်။ Josephine slab ပုံစံသည် ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်ရှိ ရိုးရှင်းသော အဆောက်အဦများကို အသုံးပြုခဲ့ပြီး၊ နံရံများနှင့် slabs အလွှာများအဖြစ် tectonic အစီအစဉ်ကို ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။ အိမ်များ၏ နံရံများကို ကြီးမားသော တံတိုင်းများအစား ပုစွန်ကြိုးများဖြင့် အလှဆင်ထားသည်။
Alter Markt ရှိ ရင်းနှီးသောရင်ပြင်အလယ်တွင် ယခင်ဈေးစမ်းရေတွင်းသည် စိန့်ဖလိုရီယန်အတွက် မြင့်မြတ်သော စမ်းရေတွင်းအလယ်တွင် Floriani ကော်လံတစ်ခုပါရှိသည်။ Untersberg စကျင်ကျောက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် အဋ္ဌဂံပုံရေတွင်းကို 1488 ခုနှစ်တွင် Gersberg မြို့တံတားပေါ်မှ ဈေးဟောင်းသို့ သောက်ရေပိုက်တစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးနောက် ရေဆွဲရေတွင်းဟောင်းနေရာတွင် တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Gersberg သည် Gaisberg ၏ အနောက်မြောက်ဘက် တောင်ခြေဖြစ်သည့် Gaisberg နှင့် Kühberg အကြား အနောက်တောင်ဘက်တွင် တည်ရှိသည်။ စမ်းရေတွင်းတွင် တန်ဆာဆင်ထားသော ခရုပတ်ကင်သည် 1583 ခုနှစ်မှ စတင်ခဲ့ပြီး၊ စာရွက်သတ္တု၊ ibexes၊ ငှက်များ၊ မြင်းစီးသူများနှင့် ဦးခေါင်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် သည်းထိတ်ရင်ဖိုဖွယ်အမှုန်အမွှားများဖြင့် အဆုံးသတ်ထားသည်။
အိမ်အမှတ်၊ စတုရန်းအရှေ့ဘက်ခြမ်းရှိ Florianibrunnen အဆင့်တွင်၊ 6၊ သည် 1591 ရာစုအလယ်ပိုင်းမှ အထွတ်အထိပ်ထွက်သည့် ပြတင်းပေါက်ဘောင်များနှင့် ခေါင်မိုးများပါရှိသော အိမ်တစ်အိမ်တွင် 18 ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သော မင်းသားဂိုဏ်းချုပ်၏ တရားရုံးဆေးဆိုင်ဟောင်းဖြစ်သည်။
မြေညီထပ်ရှိ မင်းသား-ဂိုဏ်းချုပ်ဘုန်းတော်ကြီး၏ နန်းတွင်းဆေးဆိုင်ဟောင်းတွင် ၁၉၀၃ ခုနှစ်ဝန်းကျင်က ဝင်ရိုး ၃ ဆိုင် မျက်နှာစာ ပါရှိသည်။ ထိန်းသိမ်းထားသော ဆေးဆိုင်၊ ဆေးဆိုင်၏ အလုပ်ခန်းများ၊ စင်များ၊ ဆေးစာစားပွဲအပြင်3ရာစုမှ ရေယာဉ်များနှင့် စက်ပစ္စည်းများပါရှိသည့် Rococo . ဟိ ဆေးတိုက် မူလက အိမ်နီးနားချင်း အိမ်အမှတ်7တွင် တည်ရှိပြီး ၎င်း၏ လက်ရှိတည်နေရာ၊ အိမ်အမှတ်သို့သာ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ၆၊ ၁၉၀၃။
ကော်ဖီဆိုင် Tomaselli Salzburg ရှိ Alter Markt နံပါတ်9တွင် 1700 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Austria တွင် ရှေးအကျဆုံး ကော်ဖီဆိုင်ဖြစ်သည်။ ပြင်သစ်မှလာသော Johann Fontaine သည် အနီးနားရှိ Goldgasse တွင် ချောကလက်၊ လက်ဖက်ရည်နှင့် ကော်ဖီတို့ကို ကျွေးမွေးခွင့်ပြုထားသည်။ Fontaine သေဆုံးပြီးနောက် ကော်ဖီဆိုင်သည် လက်ကို အကြိမ်ကြိမ်ပြောင်းခဲ့သည်။ 1753 ခုနှစ်တွင် Engelhardsche ကော်ဖီဆိုင်ကို Archbishop Siegmund III ၏တရားရုံးသခင် Anton Staiger မှလွှဲပြောင်းယူခဲ့သည်။ Schrattenbach ကိုရေတွက်ပါ။ 1764 တွင် Anton Staiger သည် Alter Markt ကိုမျက်နှာမူသော 3-axis မျက်နှာစာနှင့် Churfürststrasse ကိုမျက်နှာမူထားသော 4-axis facade ရှိသော "Abraham Zillnerische နေအိမ်" ကိုဝယ်ခဲ့ပြီး၊ မြေညီထပ်နံရံနှင့်လျှောစောက်သောနံရံနှင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ၁၈၀၀ ပြည့်နှစ်ဝန်းကျင်က ပြတင်းပေါက်ဘောင်များ။ Staiger သည် ကော်ဖီဆိုင်ကို အထက်တန်းစားများအတွက် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသော အဆောက်အအုံအဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ Mozart နှင့် Haydn မိသားစုများမှ အဖွဲ့ဝင်များလည်း မကြာခဏ လာလည်ကြသည်။ ကော်ဖီဆိုင် Tomaselli. Carl Tomaselli သည် 1852 တွင် ကော်ဖီဆိုင်ကိုဝယ်ယူခဲ့ပြီး 1859 တွင် ကော်ဖီဆိုင်နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက် Tomaselli kiosk ကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ခြံကို Otto Prossinger မှ 1937/38 တွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးတွင် အမေရိကန်သည် Forty Second Street Café အမည်ဖြင့် ကော်ဖီဆိုင်ကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
Ludwig M. Schwanthaler ၏ Mozart ရုပ်ပွားတော်ကြီး
အထက်သြစတြီးယားပန်းပုမိသားစု Schwanthaler ၏နောက်ဆုံးမျိုးဆက်ဖြစ်သော Ludwig Michael von Schwanthaler သည် Wolfgang Amadeus Mozart ကွယ်လွန်ခြင်း နှစ် 1841 ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် 50 ခုနှစ်တွင် Mozart အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံကို ဖန်တီးခဲ့သည်။ မြူးနစ်မြို့ရှိ တော်ဝင်သတ္တုတူးဖော်ရေးမှ ဒါရိုက်တာ Johann Baptist Stiglmaier မှ ထုလုပ်ထားသော အမြင့်သုံးမီတာနီးပါးရှိသော ကြေးရုပ်ရုပ်ကို4ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ 1842 ရက်နေ့တွင် Michaeler-Platz အလယ်တွင် တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
ဂန္တဝင်ကြေးရုပ်ပုံသည် ဆန့်ကျင်ဘက်အနေအထားဖြင့် ခေတ်ပြိုင်စကတ်နှင့် ကုတ်အင်္ကျီ၊ စတိုင်လပ်စ်၊ တေးဂီတစာရွက် (လိပ်) နှင့် လော်ရယ်ပန်းကုံးတို့ကို ပြသထားသည်။ ကြေးရုပ်ကြွများအဖြစ် ကွပ်မျက်ထားသည့် အတ္ထုပ္ပတ္တိများသည် ဘုရားကျောင်း၊ ဖျော်ဖြေပွဲနှင့် အခန်းတွင်းတေးဂီတအပြင် အော်ပရာနယ်ပယ်များတွင် မိုဇတ်၏လက်ရာများကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ယနေ့ခေတ် Mozartplatz သည် Prince Archbishop Wolf Dietrich von Raitenau လက်အောက်ရှိ မြို့တွင်းအိမ်များကို ဖြိုဖျက်ခြင်းဖြင့် 1588 ခုနှစ်တွင် ဖန်တီးခဲ့သည်။ Mozartplatz 1 အိမ်သည် Salzburg ပြတိုက်တွင်တည်ရှိသော New Residence ဟုခေါ်သည်။ Mozart ရုပ်တုသည် Salzburg ၏မြို့ဟောင်းတွင်အကျော်ကြားဆုံးသောပို့စကတ်ဘာသာရပ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
Salzburg ရှိ Kollegienkirche ၏ဒရမ်အမိုး
နေအိမ်နောက်ကွယ်တွင်၊ 1696 မှ 1707 ခုနှစ်မှ Prince Archbishop Johann Ernst Graf von Thun နှင့် Johann Bernhard Fischer von Erlach တို့၏ ဒီဇိုင်းများကို အခြေခံ၍ Paris Lodron University ဧရိယာတွင် တည်ဆောက်ခဲ့သည့် Salzburg Collegiate Church ၏ ဒရမ်အမိုးခုံး တရားရုံးမှ ပန်းရံဆရာ Johann Grabner ကို ဘားနှစ်ထပ်ဖြင့် လေးထောင့်ပုံအတိုင်း ပိုင်းခြားထားသည်။
ဒရမ်အမိုးခုံးဘေးတွင် ရုပ်ပွားတော်များမြင်နိုင်သည့် ထောင့်စွန်းတွင် Collegiate Church ၏ ဘောင်ခတ်ထားသော တာဝါတိုင်များရှိသည်။ မီးပုံးတစ်ခု၊ အဝိုင်းအပွင့်ပုံစံ၊ အမိုးခုံးမျက်လုံးအထက် ဒရမ်အမိုးခုံးပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားသည်။ Baroque ဘုရားကျောင်းများတွင် မီးပုံးသည် အမိုးခုံးတစ်ခု၏ အဆုံးကို အမြဲလိုလို ဖန်တီးပေးပြီး နေ့အလင်းရောင်၏ အရေးပါသော အရင်းအမြစ်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။
Residenzplatz ကို Prince Archbishop Wolf Dietrich von Raitenau မှ 1590 ခုနှစ်ဝန်းကျင်ခန့်က Aschhof တွင်ရှိသော မြို့တွင်းအိမ်တန်းများကို ဖယ်ရှားကာ ယနေ့ခေတ် Hypo ပင်မအဆောက်အဦးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် သေးငယ်သော စတုရန်းပုံအား ဖယ်ရှားကာ 1,500 m² နှင့် မြောက်ဘက်ရှိ ဘုရားကျောင်းသင်္ချိုင်း၊ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတည်ရှိသည်။ ဘုရားကျောင်းသချိုင်းအတွက် အစားထိုးအနေဖြင့်၊ Sebastian သင်္ချိုင်းကို မြို့ဟောင်း၏ညာဘက်ကမ်းရှိ စိန့် Sebastian ဘုရားကျောင်းဘေးတွင် ဖန်တီးထားသည်။
Aschhof တစ်လျှောက်နှင့် မြို့တွင်းရှိ အိမ်များဆီသို့၊ ထိုအချိန်တွင် ဘုရားကျောင်းသချိုင်းပတ်ပတ်လည်တွင် ခိုင်ခံ့သော တံတိုင်းတစ်ခု ပြေးသွားကာ မင်းသားကြီးမြို့နှင့် မြို့နယ်ကြား နယ်နိမိတ်ကို ကိုယ်စားပြုသည့် ရဲတိုက်နံရံ။ Wolf Dietrich သည် ဤတံတိုင်းကို 1593 တွင် ဘုရားကျောင်းဆီသို့ ပြန်ရွှေ့ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်က ပင်မစတုရန်းဟု ခေါ်သည့် လူနေအိမ်ဟောင်းနှင့် အသစ်ရှေ့ရှိ ရင်ပြင်ကို ဖန်တီးခဲ့သည်။
Franziskaner Gasse နှင့် Cathedral Square ကိုဆက်သွယ်ထားသော Court Arches
ယနေ့ခေတ် Paris-Lodron တက္ကသိုလ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သော Wallistrakt ကို Prince Archbishop Paris Count von Lodron မှ 1622 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ အဆောက်အအုံကို နေထိုင်သူ Maria Franziska Countess Wallis မှ Wallistrakt ဟုခေါ်သည်။
Wallis ကျေးရွာအုပ်စု၏ ရှေးအကျဆုံးအပိုင်းမှာ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းစတုရန်း၏ အနောက်ဘက်နံရံကို ဖွဲ့စည်းထားသည့် သုံးထပ်မျက်နှာစာဖြင့် ဝင်းမုခ်အဆောက်အအုံဟု ခေါ်တွင်သည်။ အထပ်များကို ပြတင်းပေါက်များထိုင်သည့် အလျားလိုက် အင်္ဂတေအင်္ဂတေအကွက်များဖြင့် ပိုင်းခြားထားသည်။ ပြားချပ်သောမျက်နှာစာအား ဒေါင်လိုက်အလေးပေးထားသည့် ထောင့်စွန်းတိုင်များနှင့် ပြတင်းပေါက်ပုဆိန်များ။
နန်းတွင်းအဆောက် အအုံ၏ ကြီးကျယ်သော အထပ်မှာ ဒုတိယထပ်ဖြစ်သည်။ မြောက်ဘက်တွင်၊ ၎င်းသည်နေထိုင်ရာတောင်ဘက်တွင်၊ တောင်ဘက်တွင်၊ စိန့်ပီတာ၏ Archabbey နှင့်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသည်။ တရားရုံးအဆောက် အအုံ၏ တောင်ဘက်တွင် DomQuartier ပြတိုက်၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော စိန့်ပီတာပြတိုက် ရှိသည်။ Wolf Dietrich ၏ မင်းသား-ဂိုဏ်းချုပ်ကြီး၏ တိုက်ခန်းများသည် တရားရုံး အဆောက်အအုံ၏ တောင်ပိုင်းဒေသတွင် တည်ရှိသည်။
အာကိတ်များသည် မင်းသား Archbishop Wolf Dietrich von Raitenau လက်ထက် ၁၆၀၄ ခုနှစ်တွင် တည်ဆောက်ခဲ့သော ဝင်ရိုး ၃ ထပ်၊ ၂ ထပ် တိုင်ခန်းမ ဖြစ်သည်။ ဘုရားကျောင်းဝင်းအတွင်း ခုံးခုံးများသည် Domplatz ကို ဘုရားကျောင်း၏မျက်နှာစာသို့ တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ လည်ပတ်ပြီး3ခုနှစ်တွင် ပြီးစီးသည့် ဝင်ရိုး Franziskanergasse Hofstallgasse နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။
တံတိုင်းအုတ်ခုံများမှတဆင့် အောင်ပွဲခံမုခ်ဦးမှတဆင့် အနောက်ဘက်မှ ဘုရားကျောင်းရှေ့သို့ ၀င်လာသည်။ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းရင်ပြင်သို့ အပေါက်ငါးပေါက်ဖြင့်ဖွင့်ရန် ရည်ရွယ်ထားသည့် “porta triumphalis” သည် မင်းသား-ဂိုဏ်းချုပ်၏ စီတန်းခြင်းအဆုံးတွင် အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခဲ့သည်။
Salzburg Cathedral ကို ဘုရားကျောင်းတွင် သီးသန့်ထားရှိသည်။ Rupert နှင့် Virgil။ စက်တင်ဘာလ 24 ရက်နေ့၊ St. Rupert's Day ကို ဂုဏ်ပြုပါသည်။ Salzburg Cathedral သည် 1628 ခုနှစ်တွင် Prince Archbishop Paris Count von Lodron မှဖွင့်လှစ်ခဲ့သော Baroque အဆောက်အဦးဖြစ်သည်။
ဖြတ်ကူးခြင်းသည် ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၏ အရှေ့ဘက်၊ လမ်းဖြတ်ကူးမှုအပေါ်တွင် ထောင့်ခုံတိုင်များနှင့် စတုဂံပြတင်းပေါက်များပါရှိသော ဘုရားကျောင်း၏ 71 မီတာမြင့်သော ဒရမ်အမိုးခုံးရှိသည်။ အမိုးအကာတွင် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှ မြင်ကွင်းများပါရှိသော နံရံဆေးရေးပန်းချီ ရှစ်ချပ်ရှိသည်။ မြင်ကွင်းများသည် သင်္ဘောတွင်းရှိ ခရစ်တော်၏ စိတ်အားထက်သန်မှု မြင်ကွင်းများနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။ နံရံဆေးရေးပန်းချီတန်းများကြားတွင် ပြတင်းပေါက်များပါသော အတန်းတစ်ခုရှိသည်။ ဧဝံဂေလိဆရာလေးဦး၏ ကိုယ်စားပြုချက်များကို အမိုးခုံး၏ မျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် တွေ့နိုင်သည်။
ဖြတ်ကူးသည့်တိုင်များပေါ်တွင် ဖြတ်ကူးခြင်း၏ စတုရန်းကြမ်းပြင်အစီအစဉ်မှ အဋ္ဌဂံဗုံဆီသို့ ကူးပြောင်းရန်အတွက် ကုပ်ပိုးတုံးများပါရှိသည်။ အမိုးခုံးသည် ပုံသဏ္ဍာန်ရှိပြီး ဗုံ၏ အဋ္ဌဂံပုံသဏ္ဍာန်၏ ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်စီရှိ ဗုံ၏ အဋ္ဌဂံပုံအထက် ထိပ်ဘက်သို့ ပိုကျဉ်းသွားသည့် ကွေးညွှတ်သော မျက်နှာပြင်ပါရှိသည်။ အလယ်ဗဟိုတွင် အမိုးခုံးမျက်လုံးအထက် အပွင့်အပွင့်ဖွဲ့စည်းပုံ၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ချိုးငှက်အဖြစ်တည်ရှိသည့် မီးပုံးရှိသည်။ ဖြတ်ကူးခြင်းသည် အမိုးခုံးမီးပုံးမှ အလင်းရောင်အားလုံးနီးပါးကို ရရှိသည်။
Salzburg Cathedral တွင် single-nave choir အလင်းရောင်ထဲသို့ အလင်းတန်းများ ထွန်းလင်းတောက်ပနေသည့်အတွက်၊ ကျောက်တုံးများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် စကျင်ကျောက်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အထပ်မြင့် ယဇ်ပလ္လင်နှင့် ကွေးညွတ်ထားသော မြင်းမိုရ်ကို နှစ်မြှုပ်ထားသည်။ လွင့်နေသော တြိဂံပုံမြင်းမိုရ်ဖြင့် မြင့်မားသော ယဇ်ပလ္လင်ထိပ်ကို မတ်စောက်သော သရက်ရွက်များနှင့် ကာယာတိဒ်များဖြင့် ဘောင်ခတ်ထားသည်။ ယဇ်ပလ္လင်ဘောင်သည် ခရစ်တော်၏ထမြောက်ခြင်းအား Hll ဖြင့်ပြသထားသည်။ ကောက်နုတ်ချက်တွင် Rupert နှင့် Virgil။ ယဇ်ပလ္လင်၏စားပွဲ၊ Mensa တွင် St. Rupert နှင့် Virgil တို့၏ကျောင်းဆောင်တစ်ခုရှိသည်။ Rupert သည် Austria ၏ပထမဆုံးသောဘုရားကျောင်းဖြစ်သော St. Peter ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပြီး Virgil သည် St. Peter ၏ဆရာတော်ဖြစ်ပြီး Salzburg တွင်ပထမဆုံးဘုရားကျောင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။
Salzburg Cathedral ၏ ရေကန်သည် လေးထောင့်ချိုးရှိသည်။ ပင်မရေတပ်သည် နှစ်ဖက်စလုံးတွင် ဘုရားကျောင်းများနှင့် ဇာတ်ခုံတန်းတစ်ခုဖြင့် လိုက်ပါသွားပါသည်။ နံရံများကို ချောမွေ့သော ရိုးတံများနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသော အရင်းအနှီးများဖြင့် ကြီးမားသော အစီအစဥ်ဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည်။ pilasters များ ထက် တွင် ပတ် ပတ် လည် ၊ cranked entablature တစ်ခု ရှိသည်
cranking ဆိုသည်မှာ ဒေါင်လိုက်နံရံအချွန်တစ်ခုပတ်ပတ်လည်ရှိ အလျားလိုက် cornice တစ်ခု၏ ပုံဆွဲခြင်းဖြစ်ပြီး အပြူးထွက်နေသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအပေါ်မှ cornice တစ်ခုကို ဆွဲယူခြင်းဖြစ်သည်။ entablature ဟူသော ဝေါဟာရသည် တိုင်များအထက် အလျားလိုက် တည်ဆောက်မှုဆိုင်ရာ ဒြပ်စင်များ တစ်ခုလုံးကို ဆိုလိုသည်ဟု နားလည်သည်။
pilaster နှင့် entablature ကြားရှိ အကန့်များတွင် မြင့်မားသော ခုံးခုံးခုံးများ ၊ သရက်ကင်းစင်များ နှင့် နှစ်ပိုင်း ဧည့်ခန်းတံခါးများပေါ်တွင် အပြူးထွက်နေသော လသာဆောင်များ ရှိသည်။ Oratorios၊ သီးခြားဆုတောင်းခန်းငယ်များသည် ရေတပ်၏ပြခန်းတွင် သစ်လုံးကဲ့သို့တည်ရှိပြီး ပင်မအခန်းသို့တံခါးများရှိသည်။ ဟောပြောချက်တစ်ခုအား အများအားဖြင့် အများသူငှာ မဖွင့်ထားသော်လည်း၊ ဥပမာအားဖြင့် ဓမ္မဆရာ၊ သာသနာပြုအဖွဲ့ဝင်များ၊ ညီအစ်ကိုအသင်းအပင်းများ သို့မဟုတ် ထင်ရှားကျော်ကြားသော ယုံကြည်သူများအတွက် သီးသန့်ဖြစ်သည်။
တစ်ခုတည်းသော ရေတပ်အလျားလိုက် လက်နှစ်ဖက်နှင့် တေးဂီတအဖွဲ့တစ်ခုစီသည် စက်ဝိုင်းခြမ်းရှိ စတုရန်းဖြတ်ကျော်သည့် စတုရန်းပုံသို့ ထောင့်မှန်စတုဂံထမ်းပိုးဖြင့် ချိတ်ဆက်သည်။ conche တွင်၊ semicircular apse၊ choir ၏ပြတင်းပေါက် ၃ လွှာမှ ၂ ခုကို pilasters များဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ပင်မရေတပ်၏ ဖြတ်ကျော်ခြင်းသို့ ကူးပြောင်းရာတွင် လက်နှစ်ဖက်နှင့် သံပြိုင်အဖွဲ့ကို pilaster အလွှာများစွာဖြင့် ချုပ်နှောင်ထားသည်။
တစ်ခုတည်းသော သွယ်ဝိုက်သောအလင်းရောင်ကြောင့် ရေလမ်းကြောင်းသည် အမှောင်တစ်ပိုင်းဖြစ်နေချိန်တွင် Trikonchos များသည် အလင်းရောင်ဖြင့် ပြည့်လျှံနေပါသည်။ လက်တင်လက်ဝါးကပ်တိုင်တစ်ခုကဲ့သို့ ကြမ်းပြင်တစ်ခုနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပြီး၊ ဖြတ်ကျော်ဧရိယာရှိ ဖြောင့်စင်းသောလမ်းကြောင်းသည် အလားတူဖြောင့်တန်းမှုတစ်ခုဖြင့် ထောင့်မှန်ဖြတ်ကူးသည့်၊ သုံးချောင်းတွဲအဖွဲ့၊ trikonchos၊ အရွယ်အစားတူ စက်ဝိုင်းခြမ်းရှိ apses သုံးခု၊ ဆိုလိုသည်မှာ အရွယ်အစားတူ စက်ဝိုင်းပုံ apses၊ စတုရန်းတစ်ခု၏ ဘေးနှစ်ဖက်တွင် ကြမ်းပြင်အစီအစဥ်သည် မုန်လာဥအရွက်ပုံသဏ္ဍာန်ရှိစေရန်အတွက် လေးထောင့်ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်တူသည်။
အနက်ရောင်ဖြင့် တန်ဆာဆင်ထားသော အဖြူအမွှေးတိုင်များဖြင့် ထုလုပ်ထားသော အုတ်ချပ်များသည် ပွဲလမ်းသဘင်များ၊ ခုံးခုံးအောက်ဘက်မှ အလှဆင်ထားသည့် မြင်ကွင်း၊ ဘုရားကျောင်းဆောင်များနှင့် ပုထိုးများကြားရှိ နံရံဇုန်များကို အလှဆင်ထားသည်။ အင်္ဂတေသည် ပျော့ပြောင်းသော အမွှေးအကြိုင်များဖြင့် ဆက်စပ်နေသော အဆောက်အအုံအပေါ်တွင် ဖြန့်ကျက်ပြီး chords များကြားရှိ အခန်းအတွင်း အနီးကပ်ချိတ်ထားသောဘောင်များပါရှိသော ဂျီဩမေတြီအကွက်များ အစီအစဥ်ဖွဲ့စည်းသည်။ ဘုရားကျောင်း၏ကြမ်းပြင်တွင် တောက်ပသော Untersberger နှင့် အနီရောင်ရှိသော Adnet စကျင်ကျောက်များ ပါဝင်သည်။
Hohensalzburg ခံတပ်သည် Salzburg မြို့ဟောင်းအထက် Festungsberg ပေါ်တွင် တည်ရှိသည်။ 1077 ခုနှစ်ဝန်းကျင်တွင် Salzburg ၏ Archdiocese of Salzburg ၏အောင်မြင်ကျော်ကြားသူ Archbishop Gebhard မှ Romanesque နန်းတော်အဖြစ် XNUMX ခုနှစ်ဝန်းကျင်တွင် တောင်ထိပ်ကိုဝိုင်းရံထားသော မြို့ရိုးဖြင့်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ဘုန်းတော်ကြီး Gebhard သည် ဧကရာဇ် Heinrich III၊ 1017 – 1056၊ ရောမ-ဂျာမန်ဘုရင်၊ ဧကရာဇ်နှင့် Bavaria မြို့စားတို့၏ နန်းတွင်းဘုရားကျောင်းတွင် လှုပ်ရှားနေပါသည်။ 1060 ခုနှစ်တွင် သူသည် ဂိုဏ်းချုပ်အဖြစ် Salzburg သို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ သူသည် ဂိုဏ်းချုပ် Gurk (1072) နှင့် Benedictine ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း Admont (1074) တို့ကို တည်ထောင်ရန်အတွက် အဓိကအားဖြင့် သူကိုယ်တိုင် မြှုပ်နှံခဲ့သည်။
1077 ခုနှစ်မှစတင်၍ Swabia နှင့် Saxony တွင်9နှစ်ကြာနေထိုင်ခဲ့ရသည်၊ အကြောင်းမှာ Henry IV ၏စစ်ထုတ်ခြင်းနှင့်နှင်ထုတ်ခြင်းခံရပြီးနောက်သူသည်ဆန့်ကျင်ဘက်ဘုရင် Rudolf von Rheinfelden နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့ပြီး Heinrich IV ကိုဆန့်ကျင်ရန်မိမိကိုယ်ကိုအတည်မပြုနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူ၏ဂိုဏ်းချုပ်၌။ အကြွင်းမဲ့အာဏာရှင်နှင့် ခွဲထွက်ရေးဝါဒီများကို အုပ်ချုပ်ခဲ့သည့် ဂိုဏ်းချုပ်ဘုန်းတော်ကြီး Leonhard von Keutschach လက်အောက်ရှိ လူနေရပ်ကွက်များကို ၁၅၀၀ ခန့်တွင် သပ်ရပ်စွာ ပြင်ဆင်ပြီး ခံတပ်ကို ၎င်း၏ လက်ရှိအသွင်အပြင်အတိုင်း တိုးချဲ့ခဲ့သည်။ ခံတပ်၏တစ်ခုတည်းသော မအောင်မြင်သောဝိုင်းရံမှုသည် 1500 ခုနှစ်တွင် တောင်သူလယ်သမားစစ်ပွဲတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ 1525 ခုနှစ်တွင် ဂိုဏ်းချုပ်ဂိုဏ်းချုပ်အဖြစ်မှ လွတ်မြောက်လာပြီးနောက် Hohensalzburg ခံတပ်သည် နိုင်ငံတော်၏လက်ထဲတွင် ရှိနေခဲ့သည်။
Salzburg Kapitel မြင်းရေကန်
အလယ်ခေတ်တွင်ရှိပြီး၊ ထိုအချိန်က ရင်ပြင်အလယ်တွင် Kapitelplatz တွင် "Rosstümpel" ရှိသည်။ Prince Archbishop Leopold Freiherr von Firmian လက်ထက်တွင် Prince Archbishop Johann Ernst Graf von Thun နှင့် Hohenstein ၏တူဖြစ်သူ၊ Salzburg ၏စစ်ဆေးရေးမှူး Franz Anton Danreiter ၏ဒီဇိုင်းအရ ထောင့်ကွေးနှင့် balustrade အသစ်ကို 1732 ခုနှစ်တွင် တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ တရားရုံးဥယျာဉ်များ။
မြင်းများ ရေကန်အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ခြင်းသည် ပင်လယ်နတ်ဘုရား နက်ပကျွန်း ကျွန်းပေါ်ရှိ တြိစွန်းတစ်စင်းနှင့် သရဖူကို ပြသထားသည့် ပန်းပုအဖွဲ့ဆီသို့ တိုက်ရိုက်ဦးတည်ပြီး တစ်ဖက်တစ်ချက်စီတွင် ရေစွတ်နေသော ထရီတွန် ၂ ကောင်ပါသော ရေစီးရေလာရှိသော ပင်လယ်မြင်းပေါ်တွင် ထက်ဝက်၊ လူ၏ကိုယ်ခန္ဓာအပေါ်ပိုင်းနှင့် အမြီးဆူးပါရှိသော ငါးနှင့်တူသော ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်း၊ တန်ဆာပန်းအိုးများဖြင့် သရဖူဆောင်းထားသော အဝိုင်းခုံးအဝိုင်းအတွင်း၊ Alter Markt ပေါ်ရှိ Floriani စမ်းရေတွင်းကိုလည်း ဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့သူ Salzburg ပန်းပုဆရာ Josef Anton Pfaffinger မှ ခန့်ညားထည်ဝါပြီး ရွေ့လျားနေသော ရုပ်တုကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကြည့်ရှူရန် ဖားဖိုများပေါ်တွင် လက်တင်ဘာသာဖြင့် ကမ္ပည်းထိုးထားသည့် ခရိုနိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး မြင်းမိုရ်လယ်ကွင်းရှိ မင်းသားဂိုဏ်းချုပ်ဘုန်းတော်ကြီး Leopold Freiherr von Firmian ၏ လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ထုလုပ်ထားသော နှစ်နံပါတ်များကို မီးမောင်းထိုးပြထားသည့် စာလုံးကြီးများကို ဂဏန်းများအဖြစ် မီးမောင်းထိုးပြထားသည်။
Residenzplatz မှ နေအိမ်ဟောင်း၏ ခြံဝင်းအတွင်းသို့ ပထမဆုံးဝင်ရောက်သည့်အခါ သင်ပထမဆုံးမြင်ရသည့်အရာတစ်ခုမှာ စမ်းရေတွင်းတစ်ခုနှင့် အနောက်ဘက် ၀တ်ရုံများ၏ အကွက်များအောက်ရှိ နဂါးကိုသတ်သည့် ဟာကြူလီဖြစ်သည်။ Hercules သရုပ်ဖော်ပုံများသည် နိုင်ငံရေးကြားခံအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့သည့် ခန့်ညားထည်ဝါသော အနုပညာလက်ရာများ၏ အထိမ်းအမှတ်များဖြစ်သည်။ ဟာကြူလီသည် ဂရိဒဏ္ဍာရီမှ ရုပ်ပုံကားချပ် အစွမ်းသတ္တိကြောင့် ကျော်ကြားသည်။ သူရဲကောင်းကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုသည် နိုင်ငံတော်အတွက် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခဲ့သည်၊ အကြောင်းမှာ နတ်တစ်ပိုင်းဘုရားရုပ်များထံ အယူခံဝင်မှုသည် တရားဝင်မှုနှင့် မြင့်မြတ်သောကာကွယ်မှုဖြစ်ကြောင်း အာမခံသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Hercules မှ နဂါးသတ်ခြင်း၏ သရုပ်ဖော်ပုံသည် ဘုရားကျောင်း၏ အရှေ့ဘက်တွင် ပြန်လည်တည်ဆောက်ထားသော အိမ်အသစ်နှင့် ဘုရားကျောင်းအနောက်ဘက်တွင် ကြီးမားစွာ ပြန်လည်တည်ဆောက်ထားသော ဘုန်းတော်ကြီး Wolf Dietrich von Raitenau ၏ ဒီဇိုင်းကို အခြေခံထားသည်။
Salzburg Residence ညီလာခံ
1803 ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာမပေါ်မီ နောက်ဆုံး Salzburg မင်းသား ဂိုဏ်းချုပ် ဂိုဏ်းချုပ် Hieronymus Graf von Colloredo သည် ထိုအချိန်က ဂန္ထဝင်ဆန်သော အရသာနှင့်အညီ နန်းတွင်းဆရာ Peter Pflauder ၏ နေထိုင်ရာ အခန်းများ၏ နံရံများကို အဖြူရောင်နှင့် ရွှေဖြင့် အလှဆင်ထားသည်။
ထိန်းသိမ်းထားသော အစောပိုင်း ဂန္တဝင် အုတ်ကြွပ်မီးဖိုများသည် 1770 နှင့် 1780 ခုနှစ်များ ကတည်းက ဖြစ်သည်။ 1803 တွင် ဂိုဏ်းချုပ်အုပ်ချုပ်ရေးကို လောကီရေးရာအဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ အင်ပါယာတရားရုံးသို့ ကူးပြောင်းမှုနှင့်အတူ အဆိုပါနေအိမ်ကို သြစတြီးယားနယ်ချဲ့မိသားစုမှ ဒုတိယနေထိုင်ရာအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့သည်။ Habsburgs သည် နိုင်ငံတော်အခန်းများကို Hofimmobiliendepot မှ ပရိဘောဂများဖြင့် အလှဆင်ပေးခဲ့သည်။
အစည်းအဝေးခန်းကို မူလက မျက်နှာကျက်မှဆွဲထားသော ဖယောင်းတိုင်များနှင့် အသုံးပြုရန် ရည်ရွယ်ထားသည့် မီးတိုင် ၂ လုံး၏ လျှပ်စစ်အလင်းရောင်ဖြင့် ကြီးစိုးထားသည်။ Chamdeliers များသည် Austria တွင် "Luster" ဟုခေါ်သော အလင်းရောင်ရှိသော အရာများဖြစ်ပြီး အလင်းအား အလင်းပြန်ရန်ဖန်ခွက်များစွာကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အလင်းရောင်ကို အလင်းပြန်စေသည့် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ မီးမောင်းထိုးပြထားသော ခန်းမများတွင် ကိုယ်စားပြုရည်ရွယ်ချက်အတွက် Chandelier များကို မကြာခဏအသုံးပြုကြသည်။